China mafuta-akanyudzwa transformer vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Iyo "S11" 35KV simba shanduri chishandiso chakakosha mukutenderera kwesimba uye shanduko sisitimu ine kurasikirwa kwakaderera. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzemagetsi dzemagetsi nemagetsi emagetsi, nezvimwe.
Unyanzvi parameter e10KvS11 akateedzana kaviri ichitenderera isiri-yemagetsi voltage inodzora simba shanduko
Muenzaniso Rated chinzvimbo (KVA) Voltage mubatanidzwa yekukanda renji Kubatanidza boka nhamba Kwete-mutoro kurasikirwa (w) Mutoro Kurasikirwa 75C (W) Kwete-mutoro ikozvino (%) Ipfupi redunhu impedance (%)
Yakakwira Voltage (KV) Yakakwira voltage yekukanda renji (%) Yakadzika Voltage (KV)
S11-50 / 35 50 0.4 0.16 1.20 / 1.14 1.3 6.3
S11-100 / 35 100 0.23 2.01 / 1.91 1.1
S11-125 / 35 125 0.27 2.37 / 2.26 1.1
S11-200 / 35 200 0.34 3.32 / 3.16 1
S11-315 / 35 315 0.48 4.75 / 4.53 0.95
S11-400 / 35 400 35 ± 5% Yyn0 0.58 5.74 / 5.47 0.85
S11-500 / 35 500 38.5 ± 2 × 2.5% Dyn11 0.68 6.91 / 6.58 0.85
Phase nhamba kusiyanisa
Inogona kuve yakakamurwa kuita matatu-chikamu shanduko uye imwechete-chikamu shanduko. Mune matatu-chikamu magetsi sisitimu, iko kushandisirwa kwetatu-chikamu shanduko, kana chinzvimbo chakanyanya uye chakatemerwa nemamiriro ekufambisa, mune matatu-chikamu simba sisitimu inogona zvakare kuiswa kune matatu-chimwe-chikamu shanduko yekuumba shanduri boka.
Inogona kuve yakakamurwa kuita mbiri ichitenderera transformer uye matatu ichitenderera transformer. Kazhinji maTransformer ari maviri-anotenderera ma transformer, ndiko kuti, kune maviri akakomberedza pane simbi musimboti, imwe ndeye yekutanga mavhiri, imwe ndeye yechipiri ichitenderera. Tri-ichitenderera maTransformer akakura-anokwanisa mashanduri (pamusoro pe5600 kVA) anoshandiswa kubatanidza matatu akasiyana magetsi magetsi ekuparadzira mitsara. Mune zviitiko zvakakosha, kune zvekare maSatoni maTransformer anoshandisa mamwe mavhiri.
Inogona kuve yakakamurwa kuita iron-musimboti shanduko uye iron-ganda shanduko. Kana iyo inotenderera pasuru iri yepakati periphery iri yepakati mhando shanduko; Kana iyo simbi simbi yakaputirwa padivi peiyo ichitenderera, iyo simbi-yakapfeka shanduko. Izvo zviviri zvakati siyanei muchimiro, asi hapana musiyano wakakosha musimboti. Simba mashanduro nderorudzi rwepakati.
Iyo inoshandura inonyanya kugadzirwa nesimbi simbi, ichitenderera, tangi yemafuta, piro yemafuta, kuputira bushing, pombi switch uye gasi relay.
Iyo simbi simbi
Iyo simbi simbi ndiyo yemagineti wedunhu chikamu cheshanduri.Hysteresis kurasikirwa uye eddy kurasikirwa kwazvino kunoitwa panguva yekushanda.Kuti udzikise kupisa kurasikirwa uye vhoriyamu uye huremu, iyo musimboti inoumbwa neinotonhora-yakakungurwa zviyo yakatarisana nesilicon simbi simbi ine yakakwira magnetic conductivity isingasviki 0.35mm. Zvinoenderana nekurongedzwa kwekutenderera mukati, pane mhando yemhando uye mhando yegobvu.
Mune iyo transformer yehukuru hukuru, kuitira kuti kupisa kunogadzirwa nekurasikirwa kwesimbi musimboti kunogona kutorwa zvizere nemafuta ekudzivirira panguva yekutenderera, kuti uwane kugona kwakanaka, iyo inotonhora mafuta chiteshi inowanzo kupihwa mukati iyo simbi simbi.
Iyo ichitenderera uye simbi musimboti ndiyo yepakati zvinhu zveshanduko. Nekuti pane kupokana mukuzvimisa pachako kana kubatana nekupokana mujoinhi, kupisa kunofanirwa kugadzirwa nemutemo waJoule Naizvozvo, iyo ichitenderera haigone kupfuudza yazvino yakakwira kupfuura yazvino ratidziro kwenguva yakareba. Pamusoro pezvo, iyo pfupi-redunhu razvino ichaburitsa yakakura simba remagetsi pamagetsi uye inokuvadza iyo transformer.Its yekutanga kumhanyisa ine yakadzika mhando uye inopindirana mhando mbiri mhando.
Iko kukanganisa kukuru kweanoshandura madenderedzwa ipfupi dunhu pakati pekutendeuka uye pfupi denderedzwa kune shell.Interturn pfupi dunhu rinonyanya kukonzerwa nekuvhara kukwegura, kana nekuda kweiyo transformer kuwandisa uye kuburikidza neiyo pfupi yedunhu kuputira neyakagadziriswa kukuvara. Iko pamusoro pemafuta mune anodonhedza anodonhedza, kuitira kuti iyo ichimisikidzwa iratidzike pamusoro penzvimbo yemafuta, interturn pfupi dunhu inogona zvakare kuitika; Uyezve, kana uchipfuura nepfupi redunhu, nekuda kweinopfuura-yazvino mhedzisiro yeiyo ichitenderera deformation, kuitira kuti iyo kuputira ndiko kukuvara kwemuchina, zvakare kuchaburitsa inter-dzoka pfupi wedunhu. Panyaya yekutenderedza pfupi wedunhu, iyo yazvino mune ipfupi redunhu ichitenderera inogona kupfuura iyo yakatarwa kukosha, asi iyo yazvino mukutenderera kwese inogona kusapfuura iyo yakatarwa kukosha. Mune ino kesi, chiito chekudzivirira gasi, chakakomba mamiriro, musiyano wedziviriro chishandiso ichave iri kuitawo Chikonzero cheiyo pfupi denderedzwa yegobvu iri zvakare nekuda kwekukwegura kuputira kana hunyoro hwemafuta, kudonha kwemazinga emafuta, kana nekuda kwemheni uye kushanda overvoltage. Uye zvakare, kana uchipfuura nepakati pfupi redunhu kunoitika, iyo ichitenderera ichave yakaremara nekuda kweiyo yazvino-yazvino, uye ipfupi redunhu chiitiko chichaitikawo kune ganda. Kana goko iri pfupi dunhu, zvinowanzoitika kuita kwechigadzirwa chekuchengetedza gasi uye chiito chekudzivirira pasi.
Muviri (uchimonera uye simbi musimboti) weoiri-yakanyudzwa transformer yakaiswa mutangi yemafuta izere nemafuta ekushandura, uye iro tangi remafuta rakasungwa nemahwendefa esimbi. Iyo tangi yemafuta yepakati nepadiki shanduko inoumbwa nebhokisi goko uye bhokisi revhavha. Iyo transformer muviri inoiswa mubhokisi goko. Kuvhara kwebhokisi kunogona kuvhurwa kuti kusimudzwa kunze kwemuviri kuitira kuchengetedza.
Maitiro ekuita ekugadzirisa kutaura
A. Pamusoro pe waya yemhangura yehuremu hushoma, iyo yakaderera-voltage ichitenderera yemafuta-akanyudzwa transformer kazhinji inotora iyo humburumbira chimiro chendarira foil yakatenderedza shaft; Iyo yepamusoro-voltage ichitenderera inotora yakawanda-yakasarudzika humburumbira chimiro, kuitira kuti kugoverwa kwe ampere-kutendeuka kuve kwakaringana, iyo magnetic leakage idiki, simba remuchina rakakwira, uye kushomeka-kwedunhu kuramba.
B. Matanho ekumisikidza anotorwa kune epakati uye anotenderera zvichiteerana. Zvinosunga zvikamu senge kukwirira kwechigadzirwa uye iyo yakaderera-voltage tambo waya zvese zvakagadzirirwa neako-kuzvivharira anti-kusunungura nzungu, uye chimiro chisina kusimudza musimboti chinogamuchirwa kuti chidzivirire kuvhunduka kwekufambisa.
C. Coil uye musimboti uchishandisa kupukuta kuomesa, oiri inoshandura uchishandisa vhoriyamu mafuta firita uye oiri jekiseni maitiro, kuitira kuti iyo inoshandura yemukati mwando kusvika padiki.
D. Tangi remafuta rinotora pepa remucheka, iro rine basa rekufema kuripa shanduko yehoriyamu yemafuta inokonzerwa neshanduko yetembiricha, saka chigadzirwa hachina tangi rekuchengetera oiri, izvo zviri pachena kuti rinodzora kukwirira kweshanduko.
E. Nekuti rakakomberedzwa jira rakatsiva mafuta ekuchengetera tangi, iyo transformer oiri yakasarudzika kubva kunze kwenyika, kuitira kuti inyatso kudzivirira kupinda kwe oxygen nemvura uye zvinotungamira mukuderera kwekuvhara kwekuita.
F. Zvinoenderana nezvataurwa pamusoro apa zvishanu, iyo yakanyura-yakanyura mushambadzi haidi kuchinja oiri mukuita kwese, izvo zvinoderedza zvakanyanya mutengo wekuchengetedza wedhiraivhu uye inowedzera hupenyu hwebasa reiyo shanduri.
Pashure: OEM Fekitori 10KV Kirasi S11 Series Oiri-yakanyudzwa Shanduko Yakazara Yakasimbiswa Simba Shanduri-shengte
Zvadaro: Mutengo Wakanakisa weSG (B) 10 Series Distribution Transformers Wholesale-Shengte